Gịnị mere e ji akpọ chamois Shammy? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Kedu ka ị si akpọ chamois - ihe ngwọta nye nsogbu ndị ahụ
Kedu ka ị si akpọ chamois - ihe ngwọta nye nsogbu ndị ahụ
Gịnị mere e ji akpọ chamois Shammy?
Dị ka ụfọdụ ndị ọchịchị si kwuo, ndịịkpọ okwu'shami', kpọkwara 'chammy' ma ọ bụ 'shammy', bụ maka akwa ma ọ bụ' akpụkpọ anụ 'nke e mereogba egbeAkpụkpọ anụ eji eme ihe, na 'shamwa' bụ maka anụmanụ. N'ihi naịkpọ okwunke akwa emere site na anumanu a 'sha-mi' na anumanu 'sham-wa', biko pia ebe a.07.17.2009
Na-etinye ude mmiri
Ma obu tinye ude? Nke ahụ bụ ajụjụ. Tupu anyị azaa nke a na-ere ọkụ, ajụjụ a na-ekwukarị, nke ka na-eche ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya, ka anyị leba anya n'akụkọ ihe mere eme nke ude chamois dị umeala n'obi, iji mee ka ụwa a dajụọ, kpuchido ma kwụsị chafing nke mpaghara mpaghara dị nro. Tupu e webata ọgba aghara ahụ, akụkọ mgbe ochie na-ekwu na ndị na-agba ịnyịnya ga na-etinye ibe anụ n'etiti anụ ha dị nro na obere ajị anụ iji mee ka obi dajụọ ma gbochie iri ya.
Azu anụ ha ga-eri ma echi ya gachara. Enwere ike ịgbakwunye, bredches etinyere na breeches ruo mgbe mmalite 1940s, mgbe emere ha site na akpụkpọ anụ atụrụ, ntakịrị nke ahụ. Ọ dị mma na nke dị nro na mbụ, ma mgbe a sachara ya ma kpoo ya, ọ ghọrọ ihe siri ike na abrasive.
Ọ bụghị ezigbo interface maka enweghị ngwangwa. N'ihi ya, ọ dị mkpa ka akpụkpọ ahụ siri ike ma dị nro. Voila! A mụrụ Gamscreme, n'ụdị dị mfe nke mmanụ bọlbụ ma ọ bụ otu Ude etinyere na akpụkpọ ahụ bụ cha mois n'onwe ya.
N'oge na-adịghị anya, nke a ghọrọ ihe eji eme agbụrụ tupu ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala, gụnyere mụ onwe m, n'agbanyeghị na m ga-agbakwunye ngwa ngwa na ọ bụghị na 1940 afọ ndị gara aga. Ná mmalite 1980s, anyị mepụtara mpempe akwụkwọ oche ọhụụ nke ghọrọ ọsịsọ. Na nloghachi, ekepụtara chamois ọhụrụ.
Mana kama ime ka akpụkpọ anụ ahụ dị nro dị nro, ọ kwesịrị belata mgbakasị ahụ na chafing. N'ime afọ iri gara aga, mkpụmkpụ mkpụmkpụ na teknụzụ chamois abịawo ụzọ dị nnọọ ogologo, ihe dabara adaba ka mma. Ihe mkpuchi oche ahụ na-adịkarị njọ na ergonomic, ọtụtụ na-egbochi nje antibacterial.
Na mgbakwunye, ha anaghị akpọnwụ mgbe ịsachara. Ajụjụ na-ebilite, ọ dị anyị mkpa ọdụ ọdụ? Anyị jụrụ gị na ụfọdụ ndị ọkachamara ajụjụ a. Maka nyocha anyị, anyị gwara ndị ọkwọ ụgbọ ala 11 ọkachamara n'ezie.
Abụọ n’ime ha kwuru ee, ha na-eji ude chamois oge niile. Atọ kwuru mba, anaghị eji ha ma ọlị. Isii kwuru na ha ejighi ya mee ihe mana ha jiri ya n'ọsọ ahụ.
Site na ntuli aka twitter anyị nke anyị nwetara r 5,000 votes, yabụ ekele maka ịkpọtụrụ anyị mgbe ị tozuru oke, 45% anaghị eji ya nke ọtụtụ bụ. 24% kwuru na ha na-eji ya oge ọ bụla. Na 31% kwuru mgbe ụfọdụ.
Ma ọ bụrụ na ị na-eche maka m, anaghị m eji ude chamois ma ọlị ugbu a, mana m mere na 1980s mgbe m dị obere otu ahụ, ọ bụrụ na ị na-eji chamois cream, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala bu n'obi ịme aro ole na ole ebe a na Don'ts. Ya adịla mgbe ị ga-abanye abụọ. Nke a bụ nnukwu mba.
Ee e. Ọfọn maka ndị na-ejighị n'aka ihe nke ahụ pụtara n'ezie, anyị ga-etinye ya n'ụzọ doro anya dịka o kwere mee. Ọ bụ itinye aka na ite na mkpịsị aka, soro site na itinye aka na mpaghara ahụ wee jiri mkpịsị aka ahụ gbanyeghachi ọzọ.
Ekekọrịtala ma ọ bụ gbazite ude chamois n'aka ndị ọzọ. Isi ihe kpatara ịchọ ọdịmma onwe onye nanị nke a yiri ihe na-adịghị mma bụ na ị maghị ma ha abụọ rụnyere ma ọ bụ na ha agbanyeghị. Ọ dị oke egwu.
Ya mere, were ite gi, dee ya, debe ya n'onwe gi. Ọ bụ ezie na ha nwere ọkpọkọ, nke ahụ dị mma. Nke a bụ ụkpụrụ omume cyclin karịa ihe ọ bụla, mana mgbe ị tinyere ọkpọ gị ozugbo, na nzuzo.
Mgbe ọhụụ nke onye dị n'okpuru zuru iji mee ka onye ọ bụla kwụsị nri ha. Kedu ihe ị na-eme? Kedu ihe ị na-eme? Buchi, enyi? - Emela mkpu n’olu m. - Naanị mee ya naanị gị.
Maka Chukwu. N’okwu abụọ, ee na ee e. N'ụzọ doro anya, ọtụtụ n'ime gị anaghị eji ude chamois, nke yiri ka enweghị nsogbu ọ bụla, yana uru, nke ọma, ha bụ obere akpa agwakọta.
Ya mere, gịnị ka anyị ga-ekwubi? Yabụ, ọ bụrụ na ị na-agba naanị ụbọchị ole na ole n'izu na obere uwe nwere ezigbo oche, ị kwesịrị inwe nsogbu ọ bụla. Mana ọ bụrụ na ịmalite ịmalite njem gị na njem njem gị oge niile, ọkachasị n'ọnọdụ ihu igwe dị iche, tụlee itinye ude mmiri. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ n’egwuregwu ahụ ma ghara ịnya ogologo oge, ịnwe ihe mgbu nke sadulu nwere ike ịbụ ezigbo nsogbu ebe ọ nwere ike iwepụ mpaghara gị dị ala iji gbanwee ọnọdụ ọhụrụ ahụ, ọ bara uru itinye ego dị ala.
Achọpụtara m na chafing na-abawanye mgbe mmiri mmiri, ọbụlagodi na nịịka dị elu nwere ezigbo akpụkpọ anụ chamois. Ọ bụ ezie na anaghị m ejikarị ude akpụkpọ anụ chamois mgbe m maara na m bụ ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya ogologo oge na mmiri mmiri, m ga-etinye ụfọdụ dị ka ihe mgbochi. Ihe ikpeazụ dị mkpa ị ga-echeta.
Ude chamois abụghị ọgwụgwọ maka ọnya obi ịnyịnya. Nzube ya bụ ịgbalị igbochi nke a ime. Ọ bụrụ n’inwe ezigbo iwe ma ọ bụ mmerụ ahụ, ọ bara uru ịhapụ ịnyịnya ígwè ahụ ụbọchị ole na ole ka ihe wee gwọọ; ma ọ bụrụ na ị ka na-enwe obi abụọ, kedụ maka naanị ị gbalịsie ike ịhụ ma ọ ga - eme ka ịnya ịnya gị ka mma. , ma ọ bụrụ na ịnenyeghị aha na Global Cycling Network, ị nwere ike ịme ya site na ịpị ụwa.
Ọ bụ n'efu ma ị gaghị echefu otu ederede ọzọ. Ugbu a, iji nọrọ n'elu ya, biko pịa ebe a n'okpuru ụzọ 10 kachasị mma iji zere ọnya akpịrị mgbe ị na-agba ịnyịnya, ma ọ bụ pịa n'okpuru iji chọpụta otu ị ga-esi zere nhụjuanya na nkasi obi metụtara sadulu.
Kedu ka ị si akpọ ịgba chamois?
Kedu ka ị merekpo okwu''ogba egbe'? Ọ bụrụ na ị na-akpọ ya 'shammy' ị na-eme ya na-ezighi ezi, nyocha na ọkwa. A na-akpọ ya 'sham wah'.10.09.2019
What does mogbanye onwe gị mean in English?
BekeeNdị Mmụta AsụsụNkọwankeogba egbe
: obere anụmanụ nke yiri ewu ma na-ebi n’elu ugwu na Europe na ọdịda anyanwụ Asia. : akpụkpọ anụ dị nro nabueji akpụkpọ ewu, atụrụ, ma ọ bụogba egbe. : otu nkeogba egbeeji karịsịa maka ihicha windo na ụgbọala.
anyị bụ ndị mara mma ladders olu ka ihe ọ bụla na-ahụ na igwefoto dịkwa mma Charlie ị bụ mgbe e mesịrị ụbọchị mbụ oh n'ezie ekele na-ebe a ọma ụtụtụ bịara otú a echiche na nke ga-abụ ihe dị ka atrail dị ka ị pụrụ ịhụ ebe a bụ ihe m chere na nke a bụ ma eleghị anya, a Check si a naanị wolf e nwere onye ọzọ na-etinye ụfọdụ Mbipụta ebe a ị na-apụghị ịhụ nke ọma guzobere ọ bụla ikpe m na-eche na ọ dị nnọọ ụjọ gị ọzọ ị nụrụ na nke a bụ snow na m gbalịrị ime ya na mbụ damn na m bụ m naanị m hụrụ ya na mberede ọ na-aga n'azụ osisi ya ugbu a, ị nwere ike ịnụ ha, damn ya, ọ dị mma, m ga-anọdụ ala ebe a nwayọ ma chere oh enwere otu, ọ dị mma m ga-echere ebe a dị ihe dị ka mita 30 n'azụ enweghị m ike ikwenye akara a n'ofe ahụ, ee, mgbe m zoro ụkwụ na ya ngalaba ole na ole gara aga na nnụnnụ ole na ole nyekwara m, n'ihi ya ha amalitela njem. Nke ọhụrụ bụ m, na m nọ ebe ahụ n'ezie ma hụ ya, mana m gbabara n'oké ọhịa, lee ihe anyị nwere ebe a ugbu a, ọ bụ na ọ nweghị mouflon ebe a? E egwuregwu Amaara m na ị na-ahụ ya ebe ahụ n'asụsụ Bekee Nke ahụ bụ megide m mara mmaMa m na-agwa gị banyere ịmegharị oge niile, ugbu a ka m ghọtara na mkpu a, nke dị ka ị bụ sickeagle, ga-emekwa ya n'oge na-adịghị anya, ihe mkpu na-acha ezigbo oji na nkpuchi oh ọ dị mma na ọ dị njọ ugbu a amaghị m ma eleghị anya 15 mita pụọ ​​m nna m ka hụchara akụkụ nke mmegharị na yahoo n'oké ọhịa na-adịghị elu ugwu ahụ wee chere ebe a ihe dị ka ọkara elekere na mberede nka nka si na chi m nke ahụ mara mma, n'ụtụtụ a rie nri ụtụtụ ụtụtụ a, nri ụtụtụ a na-anụ maka ịche ee, oge dị mma, ihe m na-atụghị anya ya, na ahụrụ m ka ha na bellies buds na-arịgo ugwu ahụ kemgbe m nwere nkeji ole na ole mgbe e mesịrị nke sitere na gemsbok egwuokay, m ga-echere ma enwere ike ịkwaga ya echeghị m na ekwentị ahụ ga-alọghachi n'oge ikpeazụ mgbe m mechiri igwefoto m na-asa agba ma achọrọ m ịhụ ihe na-eme na zutere ndị dinta abụọ n'ehihie mgbe ha nọdụrụ ala n'ebe ahụ t Ọ kụrụ fe ebe a na-agbanye ebe ahụ ma nụ ka eriri ahụ na-agagharị ma ee, ha gwara m na ha ga-achụ otu ebe ma ha ga-agbapụ ugboro abụọ mana ọ gbaghị ya site na egbe sitere n'ofe ndagwurugwu ahụ ma ha enweghị ike ịchọta ya iji gbochie ya nke ahụ? Ekwenyesiri m ike na ọ dị mma ma ee, ejiri m n'aka na ha chọrọ ịkụ puck ahụ tupu ọ mechie mpempe akwụkwọ na-enweghị ngwụcha, mana ee, ugbu a ọ dị ka ha enwetaghị ya n'ihi na enwetara m ya tupu oge ahụ ma ọ bụ naanị ịhụnanya na-ekpo ọkụ. Nwoke a ee, ya mere, anaghị m eme ihe ọ bụla mana ejiri m n'aka na ha na-atụ ụjọ ma na-aga n'ihu n'ihi na ị maara na ọ mara mma n'echi ya ma ọ ka njọ n'echi ya mgbe m hụrụ ya ihe m dekọrọ na akụkụ 1 na ee ee, nke na-eme ka o zuo oke, ọ na-abụ abụ ma enwere m ike ịnọ ebe ahụ? ugwu di elu zoro elu n'akụkụ nihi na net a bu snow gbazee n’izu gara aga ya mere ejiri m n’aka na odighi achota ebe I ga eri ebe ahu ugbua ozo n’ebe nzuzu ahu di ebe ahu. n'ụtụtụ a ma hụ ihe ka anyị hụ ihe anyị nwere, achọpụtara m na enwere m ụra ebe a ka m wee nwee ike ịme obere akụ nke ihe m nwere nnukwu obi ụtọ ugbu a, anyị ga-emepụta ihe iji mee mmadụ Inyeghachi ihe nye ndi ozo nihi na m nwetara otutu ebe a obu obere oke m, i laghachi azu oh nwoke a no m ebe a Wow ejighi m n'aka ma onye a si n'ubi anyi puta ma osisi anyi di ka o na emeputa ihe oma ndi oma m ga ahuta ihe oma ka diri m adighi aju oyi ka m choo inuwa onye obula ebea, oputara m nke oma na m nwere ezigbo gbalia mba obuna m nwetara rimfire ka mbelata obere oku wee hie en en ok ok ka anyi bia na anyi aghaghi ihunanya ozo anyi ga ahu ma oburu na ahihia ahihia nke a zuru oke oh yeah odi ka okwu ahu dikwa obere mmiri Ofee ebe a, obere ọkụ dị mma, ma lee, anyị nwere obere ụbọbọ abụọ na m ga-ejide nke ukwu n'abalị a iji hụ ya ka ọ dị, mana enwere ike igosi gị obere nso taa ihe m na-eme, gamin ka na eti nkpu ebe na ee, lelee gi onye m mebiri otiti ka m nwee obere okwu, ugbua okwu ikpeazu ekwesiri inwe obsidian dika m na adi mma ma ilaghachi na cell gi. N'ebe dị anya enwere ebe ahụ na enwere m ike ị nweta naanị m na-enweta ebe a n'ihi na m gafere otu n'ime ọkọlọtọ m nwere ebe m debere m, otu ikpo okwu dị ebe a wee wepụ ọkọlọtọ ma ọ gafere na nke ahụ Inweta m ga-ahụ ihe anyị na-eme ya mere m ji wụfee ugwu ahụ ma ee, ị maara na anaghị m ekpebi ime ihe ahụ na-eme ezigbo nkọ, ha ga-egbutu ihe ole na ole iji hazie ihe ndị a niile. bido na mbido ugbua otu ihe n’ebe a ma eleghi anya m ga-ahu nke a hump na-aga ebe a mara mma I am already already their two broken theots up here I don't know, craz y, ikekwe ọ bụghị ụbọchị dị mma maka ụra, mana ọ bụ ebe ahụ ka ị kacha mụta ihe, yabụ ma eleghị anya ọ bụ ụbọchị dị mma bịa nara ụra m na-aga n'ezie na ihe niile a na-eme na nke a bụ ihe mmụta na-esote oh boy bụ? ihe na-eme ee ee echiche m ugbua n’ebe ọzọ m ga-aga ọrụ ugbua, daalụ maka iburu m, lekọta onwe gị anya
Kedụ ka iji chamois na ahịrịokwu?
Tony abịala ma bido ụbọchị m gbaziri ego, bọket naogba egbena nhicha ụgbọala m, nke ruru unyi. Anya ya nwere ahụmahụ ga-ahụkwa ebe nzuzo nke anụ ọhịa mpaghara gụnyereogba egbe, nne na nne na-egwuri egwu.Jirinaanị mmiri tepid na olulu mmiri nke ọmaogba egbema ọ bụ akwa micro-fiber iji hichaa enyo.
Gịnị bụ chamois English?
BekeeNdị Na-amụ Asụsụ Nkọwa nkeogba egbe
: obere anụmanụ nke yiri ewu ma na-ebi n’elu ugwu na Europe na ọdịda anyanwụ Asia. : akpụkpọ anụ dị nro nke e ji akpụkpọ ewu, atụrụ, ma ọ bụogba egbe. : otu nkeogba egbeeji karịsịa maka ihicha windo na ụgbọala.
Gịnị bụ ude chamois?
Ude chamoisbụ viscous ma ọ bụ buru ibuudenke na-ebelata esemokwu n’etiti akwa na anụ. A makwaara dị ka mgbochi chafingude, ọ na - enyere aka igbochi ahụ erughị ala na - emetụta akpụkpọ ahụ nke ọtụtụ ndị na - agba ịnyịnya ígwè na ndị ọgba ọsọ na - enwe mgbe ha na - azụ ọzụzụ.Ọnwa Ise 5, 2020
Gịnị bụ ahịrịokwu maka mma?
Ndị Knickers mara ha ikpeima atu. Mgbe ejiji na aji abụọ, ajị anụmmana sọks, ha wuru skis ha n’elu jeep ha ma chụga ndịda site n’obodo gaa n’ugwu. bodybuilding idaha yiri ka nwere yammana ighikota.
Chamois obu ewu?
Naogba egbe(Rupicapra rupicapra) bu udi nkemkpi-antelope nke di ugwu na Europe, site na odida anyanwu rue owuwa anyanwu, tinyere ugwu Cantabrian, Pyrenees, Alps na Apennines, Dinarides, Tatra na Ugwu Carpathian, Ugwu Balkan, ndi Rila - Rhodope massif, Pindus, ndi ugwu ọwụwa anyanwụ
Kedu ihe bụ chamois?
Chamois akwabụ a owu ngwaahịa na naanị metụtara yiri nke ahụ aha ya bụ anụmanụ / akpụkpọ anụ ngwaahịa site nkịtị e ji mara. (ezigbo suede imecha na absorbance).Chamois akwadị nnọọ ka flannel, ma softer, ọzọ ọkpụrụkpụ na ndị ọzọ inogide karịa flannel na ndị ọzọ dị oké ọnụ price na-egosipụta na ihe dị iche.
Enwere ike iji Vaseline mee ihe dị ka ude chamois?
Ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya na-a swearụ iyimmanụ ala jelii(ma ọ bụ diaper rash ointments nwere ya) dị ka ọnụ ala nsụgharị nkeude chamois, ma nke ahụnwere iken'ezie ịbụ oké ọnụ ndudue. Nammanụ ala jeliiagaghị asachapụ nke gịogba egbekwesịrị,nwere ikeọnyà nje na ebe ahụ, nanwere ikebibiri ọgwụgwọ antimicrobial, ka Mathews na-akọwa.Ọgọst 30 2016
Ebee ka isi ete ete ude chamois?
Itinyeude chamoisna akpụkpọ gị
Jiri ncha na mmiri saa aka gị. Tinye mkpịsị aka gị n'imeude chamoisna scoop si banyere mkpịsị aka atọ uru nkeude(ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ). Kpoo ya aka na mkpịsị aka gị site nana-eteha ọnụ. Agehịa aka n'ime anụ ahụ.Ọnwa Ise 5, 2020
Kedu nke bụ mkpọpụta ziri ezi maka akpụkpọ anụ Chamois?
Prokpọ okwu a na-akpọkarị maka anụmanụ a bụ UK: / ˈʃæmwɑː / ma ọ bụ US: / ʃæmˈwɑː /, na-emechi ụzọ ịkpọ okwu French [ʃ a ˈ m w a]. Agbanyeghị, mgbe ị na-ezo aka na akpụkpọ anụ chamois, na New Zealand na-abụkarị maka anụmanụ n'onwe ya, ọ bụ / ˈʃæmi /, na mgbe ụfọdụ a na-asụ 'shammy' ma ọ bụ 'chamy'.
Kedu nke kacha mma nkọwa nke chamois?
Nkọwa nke chamois. 1: nke obula nke abuo, agile, nke yiri ewu (Rupicapra rupicapra na R. pyrenaica) nke mpaghara ugwu site na ndida Europe rue Caucasus ndi anaachuta anu ha. 2 ma ọ bụ obere mysha- mē nke na-adịkarịghị: akpụkpọ ahụ dị nro nke edobere site na akpụkpọ chamois ma ọ bụ nke akpụkpọ atụrụ.
Otutu otutu chamois a na-asasi otu ihe?
Otutu otutu 'chamois' bu ihe edere dika ihe di iche, enwere ike ikwuputa ya na olu nke ikpeazu. Otú ọ dị, dị ka ọ dị n'ọtụtụ ụdị okwute ndị ọzọ, a na-akpọkarị ọtụtụ anụmanụ maka otu ihe.